आफैंलाई उम्मेदवार बनाउने शीर्ष नेताले भोट नहाल्दा चुनाव हारे गुरू घिमिरे :: राजु अधिकारी :: Setopati
आफैंलाई उम्मेदवार बनाउने शीर्ष नेताले भोट नहाल्दा चुनाव हारे गुरू घिमिरे
आफ्नै समूहका तीन शीर्ष नेताले मतदान नगर्दा पार्टीको प्रदेश १ सभापति पदमा युवा नेता गुरूराज घिमिरे पराजित भएका छन्।
दुई मत अन्तरले उद्धव थापासँग पराजित घिमिरेले पुनः मतगणनाको माग गर्दै निर्वाचन समितिमा निवेदन दिएका छन्। यसबारे केन्द्रले टुंगो गर्ने कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
यदि शनिबार विराटनगरमा भएको मतदान कार्यक्रममा डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र महेश आचार्य मात्रै सहभागी भइदिएका हुन्थे भने गुरूले चुनाव जित्ने नतिजाले देखाएको छ। झापाका थापाले ८४४ मत प्राप्त गर्दा गुरूले भने ८४२ मत मात्रै पाए।
प्रदेश १ मा संस्थापन पक्ष र सिटौला पक्षका उद्धव थापा र संस्थापन इतरबाट गुरू घिमिरे प्रतिष्पर्धामा थिए। संस्थापन पक्षका नेताहरू उपसभापति विजय गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, अमृत अर्याललगायतले मतदान गर्दा निर्वाचनस्थलमै रहेका शेखर, सुजाता र महेश आचार्यले मतदान गरेनन्। कार्यक्रममा उपस्थित नेता बलबहादुर केसी पनि मतदानमा सहभागी भएनन् ।
सिटौला र देउवा पक्ष मिलेर झापामा आफ्नो उम्मेद्वार हराएका कारण संस्थापनसँग रूष्ट बनेका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको पनि गुरूलाई नै समर्थन थियो। तर, शर्मा पनि मतदान गर्न भने विराटनगर आएनन्। उनीहरू सबैले केन्द्रका नेताले प्रदेशमा मतदान नगर्ने भन्दै बसेको कांग्रेस मोरङका एक नेताले बताए ।
‘यसै पनि हाम्रो संख्या कमजोर थियो,’ पौडेल-कोइराला पक्षका ती नेताले भने ‘तै पनि ठूलै अन्तरले गुरूले जित्ने आंकलन गरेर नेताहरू भोट हाल्न गएनन्। अन्ततः दुई मतले हार्नुपर्‍यो।’
यहीँ विषयले कोइराला निवासमा आज बिहानैदेखि कार्यकर्ता र नेताबीच चर्काचर्की भएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ सभापति पदमा घिमिरेलाई उम्मेद्वार बनाउन डा. शेखर कोइरालासहितका नेताहरू जोडतोडले लागेका थिए। प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र घिमिरेले दाबी पेश गर्दा राजीवको पक्षमा सुजाता कोइराला र प्रदेश १ संसदीइ दलका नेता केदार कार्की मात्रै उभिए।
शेखर कोइराला, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरु घिमिरेको पक्षमा उभिए। आफ्नै उम्मेद्‍वारलाई शीर्ष नेताले मतदान नगर्दा अन्ततः गुरू पराजित भएको भन्दै कार्यकर्ताले रोष प्रकट गरिरहेका छन्। रक्षामन्त्रीसमेत रहेका डा. मिनेन्द्र रिजालले भने मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए। ‘गच्छदार, सिटौला सबैले भोट हाल्दा हाम्रा नेताहरु ठूलो मान्छे भएर मतदानमा नआउनु आपत्तिजनक रह्यो,’ कोइराला समूह मोरङका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो एकदमै अराजनीतिक र अपरिपक्व कदम थियो।’
मतदान हुने दिन शनिबार बिहान महेश आचार्यले आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उपसभापति पदमा उम्मेद्‍वारी घोषणा गरेका थिए। त्यहीँक्रममा उनी भन्दै थिए, ‘मेरो १० बजे फ्लाइट छ। काठमाडौं जानुछ।’ उनी १० बजेका लागि काठमाडौं उड्दै गर्दा विराटनगरमा भने दुई बजेतिर मात्रै मतदानको तयारी हुँदै थियो। उनीबाहेक अरू सबै शीर्ष नेताहरु विराटनगरमै थिए। तर, कसैले पनि मतदान नगरिँदिँदा घिमिरेले प्रदेश सभापति पदमा दुई मत अन्तरले पराजय ब्यहोर्नुपरेको हो ।
यसैबीच नेता घिमिरेले मतदानमा सहभागी नभएका ५१ जनाको बारेमा चर्चा गर्नु निरर्थक रहेको भन्दै पुनः मतगणनाको माग गरेका छन्।
‘खसेको मतमध्ये मेरो २ मत कम देखियो, भनियो। मलाई यसमा चित्त बुझेको छैन। निर्वाचन आयोगलाई पुन गणनाका लागि माग गरेको छु। आयोगले सकारात्मक कुरा गरेको छ’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘भोट हाल्न नआएका ५१ जनाको बारेमा चर्चा गर्नु निरर्थक छ। के कारणले भ्याउनुभएन। मेरो माग भनेको पुन मतगणना हो।’
मतगणनामा कमि-कमजोरी भएको हुनसक्ने भन्दै उनले पुनः मतगणनापछिको परिणाम सहजै स्वीकार गर्ने बताए।
‘त्यहाँ केही कमि कमजोरी भएको हुनसक्छ। मलाई साथीहरूले पनि भनेका छन्। फेरि पनि गणना गर्दा उहाँको मत बढी देखिए म सहजै स्वीकार गर्छुर’, उनले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८, ०२:५१:००